Ahoana ny fomba fitanisana fehintsoratra maromaro avy amin'ny mpanoratra iray ihany? - Bokin'izao tontolo izao
Ahoana ny fomba fitanisana fehintsoratra maromaro avy amin'ny mpanoratra iray ihany?
Aprily 23, 2021 ny worldbook
Rehefa manao asa fikarohana, tatitra, thesis, na lahatsoratra isika, dia ilaina ny mampiasa loharano izay manohana ny asa soratsika ary mampiasa azy ireo imbetsaka araka izay ilaina, toy ny citation, ohatra. Ary eto no holazainay aminao fomba fitanisana fehintsoratra maromaro nosoratan'ny mpanoratra iray ihany. Mba hanaovana izany, dia ilaina ny mandinika ny fitsipika novolavolaina manokana ny American Psychological Association (APA).
Ny fanoratana tsara dia mitovy amin'ny fianarana, satria mitarika ny asantsika amin'ny tontolon'ny mpamaky henjana isika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanarahana ny fitsipika tsirairay, satria ny haja dia tokony ho an'ny mpanoratra izay tafiditra ao anatin'ny lahatsoratra iray ary noho izy mandanja ireo andalana natokana ho an'ny fehintsoratra iray.
Ahoana no mitanisa ny mpanoratra iray ihany?
Misy fitsipika napetraka momba ny fomba fitanisana fehintsoratra maromaro avy amin'ny mpanoratra iray ihany ary izany dia ny tsy maintsy ataonao imbetsaka araka izay ilaina. Tsy misy lesoka amin'ny fampiasana citations, satria ny asa dia mahazo fahatokisana bebe kokoa, ny lahatsoratra dia miorina amin'ny fototra tsara. Araka ny APA, ny references avy amin'ny mpanoratra iray ihany dia azo ampiasaina amin'ny:
1. Fehintsoratra tokana
Ny fampiasana endritsoratra mitovy imbetsaka ao amin'ny fehintsoratra iray ihany dia tsy midika hoe ny taonan'ny fanendrena tsirairay, raha tsy hoe iray ihany. fanononana bibliografika ofisialy.
2. Fehintsoratra maromaro
Ny fitanisana ny mpanoratra iray ihany ao amin'ny fehintsoratra maromaro dia midika hoe avy aiza izany fampahalalana izany, satria indraindray dia tsy ho ampy ny fametrahana teny bibliografy eo amin'ny faran'ny fehintsoratra.
Raha mitanisa ny mpanoratra sy ny taom-pamoahana amin'ny faran'ny fehezanteny tsirairay ianao, dia mety hanapaka ny fikorianan'ny lahatsoratra ianao, ka tsy mahazo aina ny mpamaky ka tsy miraharaha ny famakiana.
Ankehitriny, afaka manampy ny tenanao amin'ny fitaovana tsotra ianao. Raha tokony hamarana ny fehezanteny tsirairay amin'ny fitanisana ny mpanoratra ianao, dia azonao atao ny mampiditra azy io eo am-piandohana na ao anatin'ny fehintsoratra miaraka amin'ilay teny nalaina. miaraka amin'ny andian-teny toy ny hoe: "According to (reference) ..." na "The study of (reference) dia manondro fa ...". Mila fahaiza-mamorona ianao mba hiasa amin'ny fomba tsara indrindra ary hitazonana ny mpamaky hifikitra amin'ny lahatsoratra.
Ny fomba iray hafa hanintonana mpanoratra dia ny manampy lisitra. Apetraho eo amin'ny lisitra ny teny nalaina aorian'ny andalana farany.
Ny maha zava-dehibe ny mampiaraka
Ny maha-zava-dehibe ny fitanisana fehintsoratra maromaro nosoratan'ny mpanoratra iray ihany dia ny zava-misy miantoka ny mpamaky fahalalana bebe kokoa sy tsara kokoa. Tsy vitan’ny hoe manome fahatokisana ny hevitry ny hafa. Ireo teny nindramina dia manambara ny fampiasana ny fahalalana, araka ny APA.
Miaraka amin'ny fiarahana, asa fikarohana tsara no atao ary ekena ny fandraisan'anjaran'ny mpanoratra iray, indrindra raha fehintsoratra maromaro avy amin'ny mpanoratra iray ihany no ampiasaina. Fandresen-dahatra sy fifanandrifian-javatra novokarina, vokatry ny fanoratana tsy tapaka izay manome toromarika mazava momba ny lohahevitra mahaliana ny mpamaky.
Mampiasa loharano hafa amin'ny ny fomba fitanisana pejy maromaro amin'ny tranonkala iray ihany. Raha mitanisa fampahalalana avy amin'ny fizarana samihafa, dia tsy maintsy misy reference tokana ho an'ny tsirairay. Amin’izay vao ho hitan’ny mpamaky ny tena mpanoratra na loharano.
Ankehitriny, raha manao ny citation mivantana avy amin'ny pejin-tranonkala ianao, dia tokony ho azonao antoka fa hampiditra ny laharan'ny paragrafy, fa tsy ny laharan'ny pejy, miaraka amin'ny fanononana ao amin'ny lahatsoratra. Mba hanampiana ny mpamaky hahita ny ampahany amin'ny pejy dia azonao atao koa ny mampiditra laharan'ny paragrafy misy paraphrase.
2 metges sy 1 areti-mifindra